ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ : အလိမ်တွေနဲ့မိပြီ မြန်မာမဟုတ်တဲ့ တယုတ်မ
အလိမ်တွေနဲ့မိပြီ မြန်မာမဟုတ်တဲ့ တယုတ်မ
တရုတ်သတင်းဌာနတွေမှာ ၀မ်းသာအားရနဲ့ဖေါ်ပြနေတာတွေကတော့ တရုတ် အမျိုးသမီး ခေါ် Yang Xinrong (杨鑫荣) ကလာမယ့် နိုဝင်ဘာလ ရုရှမှာကျင်းပမယ့် Miss Universe ပြိုင်ပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စား ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ဂုဏ်ယူဖေါ်ပြနေကြပါတယ်။ 10月3日， 在缅甸仰光，华裔选手杨鑫荣获得缅甸环球小姐选美冠军。缅甸在仰光国家剧场当日举行2013缅甸环球小姐选美比赛，华裔选手杨鑫荣获得冠军，并将代表缅甸 参加11月在俄罗斯举行的2013环球小姐大赛。杨鑫荣2009年曾获得缅甸金凤凰中文报主办的金凤凰杯中华小姐大赛亚军 October 3, in Yangon, Myanmar, Chinese athletes Yang Xinrong get Miss Universe beauty pageant winner. Myanmar in Yangon, Myanmar National Theatre to be held 2013 Miss Universe pageant, Chinese athletes Yang Xinrong won the championship, and will participate on behalf of Burma held in Russia in November 2013 Miss Universe contest. Yang Xinrong 2009 was awarded the Golden Phoenix Chinese newspaper Myanmar Golden Phoenix Cup sponsored by Miss China contest runner-up. ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသား ပြည်သူလူထုကို အကွက်ကျကျ စီစဉ်ပြီး ၀ိုင်းဝန်းညာခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်ပါ။